မှုခင်းသတင်း – ရွှေပြည်သစ် မီဒီယာ
တရားဝင်ဇနီးမယားရှိသော ရှိုင်းထက်စံက မိမိကိုယ်ကိုလူပျိုဟု ဆိုပြီးရွှေပြည်သာလှော်ကားလမ်း ဆုံအနီး
လဖက်ရည်ဆိုင်မှ စားပွဲထိုးလုပ်နေသူ အသက်၁၃နှစ်ကျော်ရှိသမီးငယ် မ— ကို တစ်ပတ်ခန့် ခိုးယူပေါင်းသင်းခဲ့၍ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေကြောင်းနစ်နာသူမိန်းကလေး၏မိခင်ထံမှသိရသည်။ Continue reading “မယားကြီးရှိသူက အသက်၁၃နှစ် သမီးကို လူပျိုဟုလိမ်ညာ ခိုးယူပေါင်းသင်း”
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on မယားကြီးရှိသူက အသက်၁၃နှစ် သမီးကို လူပျိုဟုလိမ်ညာ ခိုးယူပေါင်းသင်း
သီဟတင်​စိုး ဝင်​​လာ​​စေဖို့ ​အိပ်​ခန်း​တံခါးကိုဖွင့်​ထားခဲ့ကြောင်း ခင်​မာမြင့်​ပြော
Posted on January 24, 2019 by moezaw
သုဝဏ္ဏနယ်မြေ ရဲစခန်းမှူး ရဲအုပ်သန်းနိုင်က အိမ်အကူ ခင်မာမြင့်​ကို ပုဒ်​မ ၂၁၁ ဖြင့်​ စွဲဆိုထား​သော အမှုမှ တရားလိုပြသက်​​သေအဖြစ်​ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​၊ ကြီးပွား​ရေးရပ်​ကွက်​မှ ရာအိမ်​မှူး ဦး​အောင်​ကြည်​ဝင်းကို ရန်​ကုန်​မြို့၊ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်​တရားရုံး၌ စစ်​​ဆေးခဲ့ခြင်းဖြစ်​သည်​။ လိမ်​လည်​တိုင်​တန်းမှု ပုဒ်​မ ၂၁၁ အတွက်​ ခင်​မာမြင့်​မှ သုဝဏ္ဏနယ်​​မြေ ရဲစခန်းမှူး​ရှေ့၌ ​​ဖြောင့်​ချက်​​ပေးရာတွင်​ ဦး​အောင်​ကြည်​ဝင်းမှာ မှတ်​တမ်းရယူခဲ့သူဖြစ်​သည်​။
အိပ်​ခန်းအတွင်းသို့ သီဟတင်​စိုး ဝင်​​ရောက်​​စေရန်​တံခါးကိုဖွင့်​ထား​ခဲ့ကြောင်း ခင်​မာမြင့်​ ​ဖြောင့်​ချက်​​ပေးခဲ့ ။ ​ပွဲစား ​ဒေါ်ညိုသင်​ကြားခဲ့သည့်​အတိုင်း အိပ်​ခန်းအတွင်းသို့ သီဟတင်​စိုး ဝင်​​ရောက်​​စေရန်​ တံခါးအား ဖွင့်​ထား​ခဲ့ကြောင်း ခင်​မာမြင့်​က ရဲထံဖြောင့်​ချက်​​ပေးခဲ့သည်​ဟု တရားလိုပြသက်​​သေ ရာအိမ်​မှူး ဦး​အောင်​ကြည်​ဝင်းက ယ​နေ့ တရားခွင်​တွင်​ ထွက်​ဆိုခဲ့သည်​။
အခင်းဖြစ်​​နေ့ ည ၈ နာရီ​ကျော်​ခန့်​က သီဟတင်​စိုး ​နေအိမ်​သို့ တစ်​ဦးတည်း ပြန်​လာပြီး ဧည့်​ခန်း၌ထိုင်​​နေစဉ်​ ​ဒေါ်ညိုသင်​​ပေးသည့်​အတိုင်း အိပ်​ခန်းတံခါးကို အနည်းငယ်​ ဟထားခဲ့​ကြောင်း၊ သို့​သော်​ သီဟတင်​စိုးမှာ ​ဧည့်​ခန်းမှ ၄င်း၏ အလုပ်​ခန်းသို့ ဝင်​​ရောက်​သွားခဲ့​ကြောင်း၊ ည ၉ နာရီခွဲတွင်​ ဇင်​မာဦးနှင့်​ သူ၏ သားသမီးများ အပြင်​မှ ပြန်​​ရောက်​လာပြီး သီဟတင်​စိုးနှင့်​အတူ ​နေအိမ်​ အ​ပေါ်ထပ်​သို့ တက်​သွားခဲ့​ပြီး​နောက်​
တစ်​​နေ့ နံနက်​ ၇ နာရီခွဲအချိန်​တွင်​ ​တာ​မွေမြို့နယ်​ရှိ ​ဒေါ်မြင့်​​၏ ​နေအိမ်၌ ​ဒေါ်ညိုနှင့်​သွား​ရောက်​​တွေ့ဆုံကာဖြစ်စဉ်အား ​ပြောပြခဲ့​ကြောင်း၊ ​ဒေါ်ညိုက ၄င်းက သင်​​ပေးသည့်​ အတိုင်းလိမ်​လည်​ထွက်​ဆိုကာ ​ငွေ​ကြေး​တောင်းရန်​နှင့်​မရပါကအမှုဖွင့်​ရန်သင်​​ပေးသည့်​အတိုင်း လိုက်​ပါ​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့​ကြောင်းခင်မာမြင့်​ကရဲထံ ​​ဖြောင့်​ချက်​​ပေးခဲ့သည်​ဟု ဆိုသည်​။
ယ​နေ့ ရုံးချိန်းတွင်​ သရုပ်​​ဆောင်​ ဇင်​မာဦးက တရားလိုပြု၍ အိမ်​အကူ ခင်​မာမြင့််နဲ့ ပွဲစား​ဒေါ်ညိုအား ပုဒ်​မ-၃၈၉ဖြင့်​ စွဲဆိုထား​​သော အမှုကိုလည်း စစ်​​ဆေးခဲ့ပြီး ​ဒေါ်ဇင်​မာဦး၏ အမ ​ဒေါ်​ကေသီဦးက တရားလိုပြသက်​​သေအဖြစ်​ လာ​ရောက်​ထွက်​ဆိုခဲ့သည်​။အမှုကို လာမည့် ဇန်​နဝါရီ ၂၈ရက်​တွင်​ ဆက်​လက်​စစ်​​ဆေးရန်​ ချိန်းဆိုခဲ့သည်​။
သုဝဏ်ဏနယျမွေ ရဲစခနျးမှူး ရဲအုပျသနျးနိုငျက အိမျအကူ ခငျမာမွငျ့​ကို ပုဒျ​မ ၂၁၁ ဖွငျ့​ စှဲဆိုထား​သော အမှုမှ တရားလိုပွသကျ​​သအေဖွဈ​ သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ​၊ ကွီးပှား​ရေးရပျ​ကှကျ​မှ ရာအိမျ​မှူး ဦး​အောငျ​ကွညျ​ဝငျးကို ရနျ​ကုနျ​မွို့၊ သင်ျဃနျးကြှနျးမွို့နယျ​တရားရုံး၌ စဈ​​ဆေးခဲ့ခွငျးဖွဈ​သညျ​။ လိမျ​လညျ​တိုငျ​တနျးမှု ပုဒျ​မ ၂၁၁ အတှကျ​ ခငျ​မာမွငျ့​မှ သုဝဏ်ဏနယျ​​မွေ ရဲစခနျးမှူး​ရှေ့၌ ​​ဖွောငျ့​ခကျြ​​ပေးရာတှငျ​ ဦး​အောငျ​ကွညျ​ဝငျးမှာ မှတျ​တမျးရယူခဲ့သူဖွဈ​သညျ​။
အိပျ​ခနျးအတှငျးသို့ သီဟတငျ​စိုး ဝငျ​​ရောကျ​​စရေနျ​တံခါးကိုဖှငျ့​ထား​ခဲ့ကွောငျး ခငျ​မာမွငျ့​ ​ဖွောငျ့​ခကျြ​​ပေးခဲ့ ။ ​ပှဲစား ​ဒျေါညိုသငျ​ကွားခဲ့သညျ့​အတိုငျး အိပျ​ခနျးအတှငျးသို့ သီဟတငျ​စိုး ဝငျ​​ရောကျ​​စရေနျ​ တံခါးအား ဖှငျ့​ထား​ခဲ့ကွောငျး ခငျ​မာမွငျ့​က ရဲထံဖွောငျ့​ခကျြ​​ပေးခဲ့သညျ​ဟု တရားလိုပွသကျ​​သေ ရာအိမျ​မှူး ဦး​အောငျ​ကွညျ​ဝငျးက ယ​နေ့ တရားခှငျ​တှငျ​ ထှကျ​ဆိုခဲ့သညျ​။
အခငျးဖွဈ​​နေ့ ည ၈ နာရီ​ကြျော​ခနျ့​က သီဟတငျ​စိုး ​နအေိမျ​သို့ တဈ​ဦးတညျး ပွနျ​လာပွီး ဧညျ့​ခနျး၌ထိုငျ​​နစေဉျ​ ​ဒျေါညိုသငျ​​ပေးသညျ့​အတိုငျး အိပျ​ခနျးတံခါးကို အနညျးငယျ​ ဟထားခဲ့​ကွောငျး၊ သို့​သျော​ သီဟတငျ​စိုးမှာ ​ဧညျ့​ခနျးမှ ၄ငျး၏ အလုပျ​ခနျးသို့ ဝငျ​​ရောကျ​သှားခဲ့​ကွောငျး၊ ည ၉ နာရီခှဲတှငျ​ ဇငျ​မာဦးနှငျ့​ သူ၏ သားသမီးမြား အပွငျ​မှ ပွနျ​​ရောကျ​လာပွီး သီဟတငျ​စိုးနှငျ့​အတူ ​နအေိမျ​ အ​ပျေါထပျ​သို့ တကျ​သှားခဲ့​ပွီး​နောကျ​
တဈ​​နေ့ နံနကျ​ ၇ နာရီခှဲအခြိနျ​တှငျ​ ​တာ​မှမွေို့နယျ​ရှိ ​ဒျေါမွငျ့​​၏ ​နအေိမျ၌ ​ဒျေါညိုနှငျ့​သှား​ရောကျ​​တှဆေုံ့ကာဖွဈစဉျအား ​ပွောပွခဲ့​ကွောငျး၊ ​ဒျေါညိုက ၄ငျးက သငျ​​ပေးသညျ့​ အတိုငျးလိမျ​လညျ​ထှကျ​ဆိုကာ ​ငှေ​ကွေး​တောငျးရနျ​နှငျ့​မရပါကအမှုဖှငျ့​ရနျသငျ​​ပေးသညျ့​အတိုငျး လိုကျ​ပါ​ဆောငျ​ရှကျ​ခဲ့​ကွောငျးခငျမာမွငျ့​ကရဲထံ ​​ဖွောငျ့​ခကျြ​​ပေးခဲ့သညျ​ဟု ဆိုသညျ​။
ယ​နေ့ ရုံးခြိနျးတှငျ​ သရုပျ​​ဆောငျ​ ဇငျ​မာဦးက တရားလိုပွု၍ အိမျ​အကူ ခငျ​မာမွငျ့နဲ့ ပှဲစား​ဒျေါညိုအား ပုဒျ​မ-၃၈၉ဖွငျ့​ စှဲဆိုထား​​သော အမှုကိုလညျး စဈ​​ဆေးခဲ့ပွီး ​ဒျေါဇငျ​မာဦး၏ အမ ​ဒျေါ​ကသေီဦးက တရားလိုပွသကျ​​သအေဖွဈ​ လာ​ရောကျ​ထှကျ​ဆိုခဲ့သညျ​။အမှုကို လာမညျ့ ဇနျ​နဝါရီ ၂၈ရကျ​တှငျ​ ဆကျ​လကျ​စဈ​​ဆေးရနျ​ ခြိနျးဆိုခဲ့သညျ​။
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on သီဟတင်​စိုး ဝင်​​လာ​​စေဖို့ ​အိပ်​ခန်း​တံခါးကိုဖွင့်​ထားခဲ့ကြောင်း ခင်​မာမြင့်​ပြော
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် အရက်မူးပြီးသောင်းကျန်းသည့် ကပ္ပိယနှင့် ဒုလ္လဘဝတ်ကိုရင်ကြီးတို့စကားများကြရာမှ ကိုရင်ကြီးကကပ္ပိယအားတုတ်ဖြင့် ရိုက်သတ်မိမှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရွှေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ပေါင်းငူညာဏအပိုင်၊ ဒေါ်ငိုတံတားရပ်ကွက်၊ မနောသုခလမ်းရှိနန္ဒိယာရာမဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအတွင်းနေထိုင်သူ ကပ္ပိယကြီး ဦးဇော်လေး(ခ)ဇော်ဇော် လင်း၊(၅၅) နှစ် ကိုဒုလ္လဘဝတ်ကိုရင်ကြီးပညာသီရိ၊ (၂၂)နှစ်က ဇန်နဝါရီလ ၂၂ ရက်၊ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့် ကစကားများရန်ဖြစ်ကြရာမှ တုတ်ဖြင့်ရိုက်လိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းပုလဲမြို့သစ်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှ သိရသည်။
“ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လူတစ်ယောက်သွေးအိုင်ထဲလဲနေလို့ ဆရာတော်က ခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့ပါဆိုပြီး ဆိုင်ကယ်သမားက အစ်ကိုတို့ဆီ အကူအညီလာတောင်းတယ်။ ဟိုရောက်တော့ အဲဒီကျောင်းက ကပ္ပိယ ဖြစ်နေတယ်။ ဖြစ်စဉ်ကိုမေးတော့ ကပ္ပိယကမူးပြီး ကျောင်းမှာသောင်းကျန်းတယ်ပေါ့။ အဲဒါကို ကိုရင်ကြီးကမခံနိုင်တော့ရန်ဖြစ်ကြတယ်ရန်ဖြစ်ရင်းရိုက်လိုက်တာပေါ့”ဟုပုလဲမြို့သစ်အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့မှမီးသတ်စခန်းမှူးကိုထင်လင်းအောင်ကအကုန်သိသတင်းဌာနသို့ပြောသည်။
တုတ်ဖြင့်အရိုက်ခံရမှုကြောင့်ကပ္ပိယကြီးဦးဇော်လေး(ခ)ဇော်ဇော်လင်းတွင်နောက်စိပွင့်ထွက်ဒဏ်ရာမျက်လုံးထဲသစ်သားစစိုက်ဝင်ဒဏ်ရာဖြင့် အခင်းဖြစ်နေရာတွင်သေဆုံးသွားသဖြင့် အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်ထားကြောင်း သိရသည်။
“လက်ရှိမှာတော့ ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေပါတယ်။ အရိုက်ခံရလို့ ကပ္ပိယကြီးကသေဆုံးသွားတယ်သူတို့ရန်ဖြစ်တာကိုဝင်တားတဲ့ကပ္ပိယကြီးမိန်းမလည်း ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်။
ယင်းဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ဒုလ္လဘဝတ်ကိုရင်ကြီး ပညာသီရိ၊ (၂၂)နှစ်ကို ထောက်ကြန့်နယ်မြေရဲစခန်း၌ (ပ)၆၅/၂၀၁၉၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ-၃၀၂/၃၂၃ ဖြင့် အမှုဖွင့်ထားကြောင်း သိရသည်။….
ဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျအရကျမူးပွီးသောငျးကနျြးသညျ့ကပ်ပိယကို ကိုရငျကွီးက တုတျဖွငျ့ရိုကျသတျ / မင်ျဂလာဒုံမွို့နယျရှိဘုနျးကွီးကြောငျးတှငျအရကျမူးပွီးသောငျးကနျြးသညျ့ကပ်ပိယနှငျ့ဒုလ်လဘဝတျကိုရငျကွီးတို့စကားမြားကွရာမှကိုရငျကွီးကကပ်ပိယအားတုတျဖွငျ့ရိုကျသတျမိမှုဖွဈပှားခဲ့ကွောငျးသိရသညျ။
ဖွဈစဉျမှာရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးမင်ျဂလာဒုံမွို့နယျရှနေံ့သာကြေးရှာအုပျစု၊ ပေါငျးငူညာဏအပိုငျ၊ ဒျေါငိုတံတားရပျကှကျ၊ မနောသုခလမျးရှိနန်ဒိယာရာမဘုနျးကွီးကြောငျးဝနျးအတှငျးနထေိုငျသူ ကပ်ပိယကွီး ဦးဇျောလေး(ခ)ဇျောဇျော လငျး၊(၅၅) နှဈ ကိုဒုလ်လဘဝတျကိုရငျကွီးပညာသီရိ၊ (၂၂)နှဈက ဇနျနဝါရီလ ၂၂ ရကျ၊ ည ၉ နာရီ ၄၅ မိနဈခနျ့ ကစကားမြားရနျဖွဈကွရာမှ တုတျဖွငျ့ရိုကျလိုကျလိုကျခွငျးဖွဈကွောငျးပုလဲမွို့သဈအရနျမီးသတျတပျဖှဲ့မှ သိရသညျ။
“ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ လူတဈယောကျသှေးအိုငျထဲလဲနလေို့ ဆရာတျောက ချေါခိုငျးလိုကျလို့ပါဆိုပွီး ဆိုငျကယျသမားက အဈကိုတို့ဆီ အကူအညီလာတောငျးတယျ။ ဟိုရောကျတော့ အဲဒီကြောငျးက ကပ်ပိယ ဖွဈနတေယျ။ ဖွဈစဉျကိုမေးတော့ ကပ်ပိယကမူးပွီး ကြောငျးမှာသောငျးကနျြးတယျပေါ့။ အဲဒါကို ကိုရငျကွီးကမခံနိုငျတော့ရနျဖွဈကွတယျရနျဖွဈရငျးရိုကျလိုကျတာပေါ့”ဟုပုလဲမွို့သဈအရနျမီးသတျတပျဖှဲ့မှမီးသတျစခနျးမှူးကိုထငျလငျးအောငျကအကုနျသိသတငျးဌာနသို့ပွောသညျ။
တုတျဖွငျ့အရိုကျခံရမှုကွောငျ့ကပ်ပိယကွီးဦးဇျောလေး(ခ)ဇျောဇျောလငျးတှငျနောကျစိပှငျ့ထှကျဒဏျရာမကျြလုံးထဲသဈသားစစိုကျဝငျဒဏျရာဖွငျ့ အခငျးဖွဈနရောတှငျသဆေုံးသှားသဖွငျ့ အငျးစိနျဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငျထားကွောငျး သိရသညျ။
“လကျရှိမှာတော့ ဖမျးဆီးစဈဆေးနပေါတယျ။ အရိုကျခံရလို့ ကပ်ပိယကွီးကသဆေုံးသှားတယျသူတို့ရနျဖွဈတာကိုဝငျတားတဲ့ကပ်ပိယကွီးမိနျးမလညျး ဒဏျရာရခဲ့တယျ။
ယငျးဖွဈစဉျနှငျ့ပတျသကျ၍ ဒုလ်လဘဝတျကိုရငျကွီး ပညာသီရိ၊ (၂၂)နှဈကို ထောကျကွနျ့နယျမွရေဲစခနျး၌ (ပ)၆၅/၂၀၁၉၊ ရာဇသတျကွီးပုဒျမ-၃၀၂/၃၂၃ ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့ထားကွောငျး သိရသညျ။….
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on အရက်မူးပြီး သောင်းကျန်းသည့် ကပ္ပိယကို ကိုရင်ကြီးက တုတ်ဖြင့်ရိုက်သတ်
အိမ်ထောင်ရှိ ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦး အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား တည်းခိုခန်းခေါ်၍ သားမယားပြုကျင့်
မန္တလေးမြို့ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် အမှတ် (၇) နယ်မြေရဲစခန်းမှ ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦး က အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား မုဒိမ်း ကျူးလွန်မှုဖြစ်ကြောင်း သိရသည် ။
ဖြစ်စဉ်မှာ မဟာအောင်မြေမြို့နယ် အမှတ် (၇) နယ်မြေရဲစခန်းမှ အိမ်ထောင်ရှိသူ ရဲဒုတပ်ကြပ် တေဇအောင် က အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား တည်းခိုခန်းတွင်ခေါ်၍ သားမယားပြုကျင့်ကြောင်း သိရသည် ။ Continue reading “အိမ်ထောင်ရှိ ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦး အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား တည်းခိုခန်းခေါ်၍ သားမယားပြုကျင့်”
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on အိမ်ထောင်ရှိ ရဲဒုတပ်ကြပ်တစ်ဦး အသက်(၁၅)နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးအား တည်းခိုခန်းခေါ်၍ သားမယားပြုကျင့်
“ဈေးဝယ်ထွက်လာသောပထမတန်းကျောင်းသူကိုအိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားကလမ်းဘေးသို့ခေါ်ဆောင် အဓမ္မပြုကျင့်စော်ကားမှုဖြစ်ပွား”စစ်ကိုင်းတိုင်းဖောင်းပြင်မြို့တွင်ဈေးဝယ်ရန်နေအိမ်မှထွက်လာသောအသက်(၇)ခန့်ကို တစ်ရွာတည်းနေ အိမ်ထောင်ရှင်အမျိုးသားက နေ့ခင်းကြောင်တောင်အချိန်အဓမ္မပြုကျင့်စော်ကား Continue reading “ပထမတန်းကျောင်းသူကို အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားက နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ အဓမ္မပြုကျင့်”
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on ပထမတန်းကျောင်းသူကို အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသားက နေ့ခင်းကြောင်တောင်မှာ အဓမ္မပြုကျင့်
သမီးရည်းစားကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာက ဓားထိုးခံရ၍ သေဆုံး
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ ည ၉ နာရီအချိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ အလယ်ရွာနေ ကိုအောင်ဇော်မြတ်(၂၉)နှစ်သည် ပဒုမ္မာလမ်းရှိ စာပေဟောပြော ပွဲသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အဆောင်သို့ ပြန်လာစဉ်
ဇနီးဖြစ်သူ မစံပယ်(၃၁)နှစ်မှ ညီဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ခိုင်လင်းဇော်(၂၀)နှစ် ဓားထိုးခံရ၍ Continue reading “သမီးရည်းစားကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာက ဓားထိုးခံရ၍ သေဆုံး”
Posted in မှုခင်းသတင်းLeaveaComment on သမီးရည်းစားကိစ္စဖြင့် စကားများရန်ဖြစ်ရာက ဓားထိုးခံရ၍ သေဆုံး